USemenya uzogijima elika-3000m
Caster Semenya. Isithombe esigciniwe: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL
INTATHELI YESOLEZWE | May 22, 2019
UMPETHA wama-Olympic uCaster Semenya, uzogijima ebangeni lika-3000m lapho ezobe eyibambe kwiDiamond League Prefontaine Classic ngoJuni 30 eCarlifornia, okuyibanga akwaziyo ukuligijima ngaphandle kokuthi ehlise izinga le-testosterone emzimbeni wakhe.
USemenya ugijime okokugcina ebangeni aziwa ngalo nasenqobe kabili kuma-Olympic kulo i-800m ekuqaleni kwenyanga kwi-International Association of Athletics Federations (IAAF) Diamond League, eDoha.
Ubegijima ngemuva kokuthi iCourt of Arbitration (CAS) ivune i-IAAF elawula ezokugijima emhlabeni ebeke umthetho wokuthi abagijimi besifazane imizimba yabo ekhiqiza i-testosterone ephezulu kunejwayelekile kwabesimame kumele badle imithi yokuyinciphisa. Lo mgomo uthinta amabanga agijinywa uSemenya, i-400m, 800m ne-1500m. Uqale ukusebenza ngoMeyi 8 okusho ukuthi Semenya ngeke akwazi ukuvikela isicoco sakhe sika-800m kwi-IAAF World Championship ngoSepthemba eDoha ngoba usekusho kaningi ukuthi akazimisele ngokudla imithi okuthiwa akayidle.
Ibanga lika-3000m alithinteki okwamanje emigomeni ye-IAAF. USemenya wayefake isikhalo kwiCAS ephikisa lo mthetho we-IAAF kodwa sachithwa. Kusalindeleke ukuthi yena nabammeli bakhe bacacise ngokuthi bayasidlulisa noma cha. Babenikezwe izinsuku eziwu-30 ukukwenza lokho kusukela ngoMeyi 1 wokuphuma kwesinqumo.
USemenya uzobe engeyona imfivilithi ukunqoba lo mjaho njengoba leli kungelona ibanga lakhe. Uzobe ebhekene nezinkakha zamabanga amaphakathi njengompetha wama-Olympic kwi-5000m uHellen Obiri waseKenya, uSifan Hassan waseNetherlands nompetha we-Indoor kwi-3000m uGenzebe Dibaba wase-Ethiopia.
USemenya uke wagijima kwi-5000m kuleli enqoba isococo sakuleli ngo-Ephreli.